Kutheni sifuna malunga namaqanda?
Amaqanda akukhona nje ephupheni, kodwa nakubomi bokwenene unokunxulumaniswa nezinto ezahlukeneyo. Okokuqala, kukubonakalisa ukuzala, kwaye okwesibini, bavame ukubonwa njengomzekelo wendalo yonke. Ngenxa yoko, amaphupha apho iqanda liye lacingwa khona lithetha izinto eziqhelekileyo kunye nehlabathi jikelele. Ukufumana ulwazi oluthe ngqo, zama ukukhumbula iinkcukacha ezisisiseko zebali.
Iqanda elikhulu lifanekisela inhlanhla kunye neemeko zemali ezizinzile. Kubafazi, iphupha elinjalo liqikelela ukuzaliswa kwintsapho. I-Eggshell ibonisa ukuba ngobomi boqobo ixesha elithile liye laphela. Inani elikhulu lamaqanda liwuphawu lobutyebi bezinto eziphathekayo, kwaye kuya kuba nethuba lokuqonda izicwangciso ezicwangcisiweyo. Ukulala, apho ndafuneka ndithenge amaqanda, ndilumkisa malunga neengxaki emsebenzini, kwaye andinakukwazi ukujamelana nabo.
Ukuba kwakufuneka uthathe amaqanda, ngoko awufuni ukusebenza nzima ukuze ufezekise iinjongo zakho. Umtoliki weliphu uthi, mhlawumbi, uya kusebenzisa iindlela zokungathembeki. Umbono ebusuku, apho ufanele ubethe amaqanda, ubonisa ukuba uyazibuyisela ngamabomu inyaniso ukuze uqaphele oko kwadalwa. Ukubona indlela inkukhu ethatha ngayo iqanda kuthetha ukuba uza kufumana iindaba ezilungileyo eziza kuba nefuthe elihle kwishishini. Ukuba uqokelela amaqanda - oku kubonisa ukuba kukho umnqweno wokutshintsha ubomi kwaye uqale yonke into ukususela ekuqaleni. Ukubukela indlela ama-chick aphuma ngayo kumaqanda, kuthetha ukuba ebomini kuya kuza ixesha elizolileyo.
Kutheni uphupha amaqanda ahlaza?
Amaqanda amasha awuphawu lokuphefumlelwa kunye neengcamango ezingavamile. Kulo mfazi, lo mbono ebusuku ubathembisa ulwalamano olutsha lomtshato. Ukuba usela amaqanda aluhlaza, kuthetha ukuba enye yezihlobo ziziphatha ngokungahambisani. Izibini, iphupha elinjalo lithembisa ukongeza kwintsapho.
Kutheni amaqanda abolileyo?
Amaqanda abonakalisiweyo abonisa ukuba izicwangciso ezicwangcisiweyo aziyi kuzaliswa ngokupheleleyo. Isitoliki sephupha sincoma ukuqwalasela kwakhona iinjongo zakhe kunye nokubuyisela phambili izinto ezibalulekileyo zokuphila. Kukho ulwazi oluneziqanda ezibolile - uphawu lokupheliswa kobudlelwane, obude bubekho buvuyo.
Yintoni amaqanda aphukile abonakala ngathi?
Ukujonga iqanda eliphukile, kuthetha, kubalulekile ukulungiselela ukuvela kweengxaki ebomini, kwaye ngokukodwa kuya kubandakanyeka kummandla wezemali. Ngaloo mbono ebusuku ubonisa ingxoxo engathandekiyo ekugqibeleni ekukhokelela ekubhujisweni kwesi sithembiso. Ukuba iqanda lichithwe - le yi-harbinger ye-ngxabano eya kutshintsha ubuhlobo phakathi kwabantu. Enye yeencwadi zephupha ithi iphupha, apho iqanda elitsha eliphukileyo liye lacingwa, lifanekisela isipho sengozi.
Ziziphi iiqanda ze-Easter?
Iphupha elinjalo luphawu oluhle, oluthembisa umphumo ophumeleleyo lwamatyala aqalisiwe. Kwababhinqileyo kwizidlelwane, iphupha elinjalo lingathathwa njengesincophiso Kubalulekile ukwenza iintlobo ngeentlobano zesini , kuba kungenjalo, iqabane lingatshintsha.
Kutheni ufuna ukuphuza amaqanda?
Ukujonga amaqanda, ukupheka kwipani yokutshiza, kuthetha, kungekudala kuya kufuneka kube yinkampani kwiingxabano ezinkulu. Iingcamango zephupha zicebisa ukuba zikhutshwe kwaye zingakhokelwa ekubanjeni abanye.
Kutheni ufuna ukuphucula amaqanda abilisiwe?
Amaqanda aphekiweyo, ngoko, abonisa ukuba umntu uya kumelana nokuphunyezwa kwezicwangciso ezicwangcisiweyo. Kungekudala uza kufunda ulwazi oluya kukunceda ukujamelana nabaphikisana nabathengileyo. Enye iphupha, apho uhlambulula amaqanda, izithembiso zitshintsha ubomi.
Kutheni i-elk iphupha?
Kutheni ivili liphupha?
Kutheni amadoda akhula umnqweno ngomunwe omncinci?
Ukunyuka kweNkosi-into engenakuyenza?
Iyintoni iphupha lokubhema eliphuphayo?
Yintoni endiyenzayo ngoLwesihlanu ongcono?
Yintoni intsapho iphupha ngayo?
Kutheni sifuna ukukhulelwa?
I-Nikola ihlobo ngoMeyi 22 - into engenakuyenza?
Kutheni izinwele ziwela ngokukhutshwa?
Kutheni sifuna iphupha leentlola kunye neebhodi?
Kuphi i-ginger ikhula?
Amakhwenkco amakhwenkwe - iingu-34 ezikhethwa ngumntwana wakho
Iimidlalo zebhola ebhokisini
Indlela yokuthutha inja kwisitimela?
USerna Williams noGigi Hadid babetha wonke umntu kumcimbi kwiGlamor
IMantras ye chakras
I-goiter ehlukileyo-nodal ye-thyroid gland - unyango
Liliphi igama likaRuslan?
UDolce Gabbana - ekwindla-ebusika 2016-2017
Indlela yokumisa i-kumihimo?
Prophylaxis ye pyelonephritis
Ingubo emfutshane entwasahlobo ka-2013
Umxholo we-Shaurma - ikhalori
Indlela yokunyamekela isisu?
Ukuhlala uhudo kumntu omdala-izizathu
Ixesha elide - ukuchitha ixesha?